Nsonaazụ Formdị 2014 Akụkọ: Nyocha na Imeziwanye Formdị Gị | Martech Zone
Fraịdee, June 20, 2014 Fraịdee, June 20, 2014 Douglas Karr
Anyị abụwo ndị enyi na ndị Fans (na ndị mmekọ) nke Mpempe akwụkwọ kemgbe akwukwo a bidoro. Enwere otutu ihe omuma na ulo oru ha ma ha anọgide na-eche banyere ndi ahia ha ma nye ha nnukwu ihe. Ha ka gosiputara ụfọdụ ihe ịtụnanya mara mma mgbe ha na-enyocha ma na-enyocha ntụgharị na ihe karịrị ndị ahịa 400,000 na ndebanye ndebanye nde ha.
Maka nkọwa zuru ezu, budataMpempe akwụkwọ 's Nsonaazụ mgbanwe ụdị 2014. Nkwupụta ahụ bụ mkpokọta data nke gụnyere ozi gbasara ihe na-eme ka ndị ọrụ gị mezue ụdị gị. Site na ezigbo ụdị ogologo ruo nke kacha mma n'okpuru bọtịnụ bọtịnụ iji mee ihe, anyị nwere olile anya na ị nwere ike iwepụta data a iji mee ka ụdị gị dị ka nrubeisi-omume dịka o kwere mee ma kwalite ya ebe ndị ahịa gị na ndu gị dị.
Okwu ndị dị mkpa iji jiri, ihe mkpali ịnye, ọnụego ntụgharị etiti, ọnụọgụ ụdị, na iji mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-emetụta ikike gị ijide mgbanwe na ụdị gị. Ndị ọchụnta ego na ndị ahịa na-eri mmiri na arịrịọ maka ozi, yabụ ikike ịkwalite ụdị gị dị oke mkpa ka ị nwee ike ịchịkọta ọgụgụ isi ịchọrọ iji nyere ndị ahịa aka ma ọ bụ mgbanwe ị chọrọ iji rụọ ọrụ azụmahịa gị! Nke a bụ nhụchalụ nke ụfọdụ usoro metrik achọtara na akụkọ ahụ:
Tags: Nsonaazụ mgbanwe ụdị 2014kacha arụ ọrụokwu bọtịnụnjikarịcha ntụgharịmgbanwetọghataụdị ubiụdị nnyefeformsmpempe akwụkwọbọtịnụ ntinyeụdị weebụ